“कतारमा आँफुलाई ७ महीनाको पे’ट बो’काएर भा’गेका आ’फ्ना प्रेमीलाई अन्तत भे’टीन् यि चेलीले’हेर्नुहोस् !
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतार बस्दै आएकी झापा बृतामोडबाट एकजना चेली युवा मञ्च नेपालका सँग आएकी छिन्। उनको खास घर इलामको दानाबारीमा रहेको उनी बताउँछिन्। उनी विगत लामो समयदेखि कतारमा कार्यरत थिइन् सोही क्रममा पश्चिम् मुगुका एकजना कपुर बाम भन्ने व्यक्तिसँग उनको सम्बन्ध हुन गयो र उनको पे ’ट मा ग ’र्भ रहन गयो।*****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,
उनले त्यी युवकसँग आजभन्दा नौ महिना अगाडि देखि सम्बन्ध हुँदै आएको र यस अघि पनि त्यी युवाले उनलाई औषधि खुवाएर दुई पटक जति ग’र्भ फा’ल्न लगाएका रहेछन्। उनी पहिलेओ लकडाउनको बेला क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् र त्यहिबेला त्यस केटाले उनलाई टिकटकमा म्यासेज गरेको थियो।
तर त्यी चेलीको ग’र्भ रहिसकेपछी बेखबर नेपाल आएर भएका र यहाँ आएर पनि बेखबर बसेकात्यी युवालाई खोजी गर्न भनी त्यी चेली पनि नेपाल आएर आफूलाई ग’र्भ ब ना उने कपुर बामको खोजी गरिरहेकी थिइन् र सोही क्रममा उनी मिडियामा आइपुगेकी थिइन्।
त्यतिबेला उनले आफूले बिहे पनि गरेको छैन र काठमाडौँबाट पढ्दापढ्दै आएको हो र आफू परीवारको एक्लो छोरो भएको अनि एउटा बहिनी जसको बिहे पनि एकवर्ष अगाडि भएको बताएका थिए। उनीहरू सुरुसुरुमा साथीसाथीको सम्बन्ध बनाएर बोल्दै गए।उनले त्यी केटाको दाइ र उनका साथीहरूलाईसमेत सोधपुछ गर्दा सबैले उसको बिहे नभएको बताएका थिए।
एकदिन उनको श्रीमतीको फोन आयो र त्यी चेलीले फोन उठाइन् र कुराकानी गरिन्। कपुरको त पहिले नै चार वर्ष अगाडि बिहे भैसकेको रहेछ र उनको एउटा दुई वर्षको छोरी पनि रहेको थाहा पाइन्। त्यतिबेला सम्म उनको पे टमा ब च्चा बसिसकेको थियो र दुई महिना भैसकेको थियो। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरर थाहा पाउनुहोस।’*****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,
Previous काठमाडौंको न्युरोड गेटमा घ,ट्यो अ,नौठो घ,टना , जे नहुनु थियो त्यही भयो ?
Next कति बजे सुत्दा लाग्छ मिठो निन्द्रा ?